“ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။ မီးတိုင်လည်းစိုက်ပြီးပါပြီ …ဆိုတဲ့ မြေကွက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် . .ဒါလေးအရင်ဖတ်ပါ” – စွယ်စုံသုတ
“ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။ မီးတိုင်လည်းစိုက်ပြီးပါပြီ …ဆိုတဲ့ မြေကွက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် . .ဒါလေးအရင်ဖတ်ပါ”
ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။
နောက်လူရှင်း မူအရပိုင်ရှင်သစ်မဖြစ်ဖြစ်အာင်ထိုးထည့်တာဘဲ။ပုံစံ-၁၀၅ ဆိုတာကမြေပုံဘဲမြေအသုံးပြုနေသူနေရာပြမြေပုံဥယျှာဉ်ခြံမြေကိုအစိုးရဆီကငှါးရမ်းအခွန်ဆောင်စိုက်ပျိုးစားသူ အတွက်လည်းပုံစံ-၁၀၅ ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ဘိုးဘွားပိုင်မြေသမားလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။
( လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံများ )
ပုံစံ(၁) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ။
ပုံစံ(၂) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။
ပုံစံ (၂-က) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။
ပုံစံ(၃) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။
ပုံစံ(၄) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် စစ်ဆေးချက်။
ပုံစံ(၅) လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူများမှတ်ပုံတင်စာရင်း။
ပုံစံ(၆) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရန်လျှောက်ထားချက်ကို ငြင်းပယ်ခံရသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။
ပုံစံ(၇) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ်။
ပုံစံ(၈) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလိုကြောင်းလျှောက်လွှာကို ငြင်းပယ်သော အကြောင်းကြားစာ။
ပုံစံ(၉) လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူအမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်လွှာ ။
ပုံစံ(၁၀) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးရန်လျှောက်လွှာ ။
ပုံစံ(၁၁) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံစာရင်း ။
ပုံစံ(၁၂) နစ်နာကြေးနှင့် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် တွက်ချက်မှု။
ပုံစံ(၁၃) အခြားသီးနှံပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်။
ပုံစံ(၁၄) လယ်ယာမြေ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ(နယ်မှာရချင်ရမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုံးဝခွင့်မပြု)(ရန်ကုန်တိုင်းမှာအခြားနည်းသုံးခွင့်ကရွာထဲရောက်နေတဲ့။ရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုအိမ်ဆောက်နေဘို့တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ရင်ခွင့်ပြုတယ်။
ပုံစံ(၁၅) လယ်ယာမြေမှတစ်ပါး အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ။(ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုတိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ပြီးအိမ်ဆောက်နေမယ်ဆိုဒီပုံစံသုံးပြီးခွင့်ပြုတယ်။ဒါကလည်းရွာနဲ့ဆက်စပ်နေမှနော်။သီးခြားကြီးဖြစ်နေရင်တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်မရဘူး)
ပုံစံ(၁၆) လယ်ယာမြေအား အခြားနည်းဖြင့်အသုံးချရန်ခွင့်ပြုပြီး ကိစ္စရပ်အပေါ် စိစစ်တွေ့ရှိချက်အခြေအနေ။
ပုံစံ(၁၇) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် မြေနုကျွန်းမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံစာရင်း။လယ်သမားအချင်းလယ်ရောင်းတော့လယ်ဝယ်သူကပုံစံ-၉နဲ့ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရလုပ်တာကိုရောကြိတ်ပြီးအမည်ပြောင်းပါတခါတည်းလျှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဖိန့်သေးသဗျ။
ရွာ / ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဥယျာဉ်ခြံမြေ